Galaxy S2 GT i9100 အတွက် Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich XXLPH Firmwar တင်နည်း
Samsung s2 အတွက် Android Ice Cream Sandwich ROM
အခုထွက်လာတဲ့ firmware က Android 4.0.3 နဲ့
XXLPH version ပါ။
အခု ROM က feature အသစ်တွေနဲ့ အသုံးပြုရတာ ရေလည်လန်းပါတယ်။
Samsung ကအရင်ထွ က်တဲ့ ROM XXLPB ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို
အခု XXLPH က Samsung Galaxy s2 အတွက်အသုံးပြုရတာပိုမို ကောင်းမွန်ပါတယ်။
XXLPH ICS Android 4.0.3 firmware for Samsung Galaxy s2
PHONE	: I9100XXLPH
CSC	: I9100OXALPH
Galaxy S2 GT i9100 အတွက်
Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich XXLPH Firmwar တင်မယ်ဆိုရင်
ဖုန်း Data တွေကို Backup လုပ်ပါ ။
- Update firmware လုပ်တဲ့ခါမှာ မိမိရဲ့ Data တွေပျက်သွားတက်ပါတယ် ။
- ဖုန်း battery ကို အနည်းဆုံး 75 % ရှိပါစေ ။
- မိမိနဲ့ဖုန်းနဲ့ ချိတ်ဆက်မဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆော့ဝဲများရှိရင်
remove / completely disable လုပ်ပေးပါ။
Update firmware လုပ်တဲ့ခါ အဆင်မပြေမူများဖြစ်တက်ပါတယ် ။
- မိမိနဲ့ဖုန်းနဲ့ ချိတ်ဆက်မဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ antivirus , firewall software ကို ပိတ်ထားပေးပါ ။
- ဖုန်းနဲ့ကွန်ပြူတာ ချိတ်တက်တဲ့ခါ ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ driver လိုပါတယ် ။
- နောက်ဆုံးအဆင့်နေနဲ့ မိမိဖုန်းရဲ့ Sim နှင့် SD Card ကိုဖြုတ်ထားပေးပါ ။
Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich ကိုတင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ဖိုင်တွေကို Download ဆွဲပါ
1. ဖုန်းနဲ့ကွန်ပြူတာနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့ခါ လိုအပ်တဲ့ ဖုန်း driver
2. Odin Multi Downloader ODIN3 V1.83
3. Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich XXLPH Firmwar File
4. Download .PIT File
Samsung Phone Driver အားရယူရန်
Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich XXLPH Firmwar update အားရယူရန်
I9100XXLPH.zip | 377.8 MB
Odin Multi Downloader ODIN3 V1.83 အားရယူရန်
ODIN3 V1.83 အတွက် .PIT Fileအားရယူရန်
Download ဆွဲထားသော ဖိုင်ကို Extract လုပ်ပါ။
( Desktop ပေါ်တွင် Extract ပြုလုပ်ပါက ပိုပြီးတော့အဆင်ပြေပါမယ် )
Driver ကို မိမိဖုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်မဲ့ ကွန်ပြူတာတွင် Install လုပ်ပါ ။
သင့်ဖုန်း Setting ထဲမှ Applications မှ
Unknown sources ကို Check box ” On ” ပေးပါ။
ပြီးလျှင် Development ထဲက USB debuggin ကို
Check box ” On ” ပေးပါ။
Odin Multi Downloader v4.38.exe ကို Run ပါ
( window7သုံးလျှင် right click နှိပ့်ပြီး administrator နဲ့ run ပါ … )
Re-Partion , Auto Reboot and F-Reset Time box တွေ ကို
ကလစ်နှိပ်ပြီး Check box On ပေးပါ ။
PIT ကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းလုပ်ဆွဲထားသော ဖိုင်ထဲမှ .pit file ကို ကလစ်နှိပ် ပြီးရွေးပေးပါ ။
– Phone ကိုနှိပ်ပြီး ဒေါင်းလုပ်ဆွဲထားသောဖိုင်မှာ
MODEM_I9100XXLPH_REV_02_CL1104396.tar file ကိုရွေးပြီး နှိပ်ပေးပါ။
– PDA ကိုနှိပ်ပြီး ဒေါင်းလုပ်ဆွဲထားသောဖိုင်မှာ
I9100_CODE_I9100XXLPH_CL118559_REV02_user_low_s.tar file ကိုရွေးပြီး နှိပ်ပေးပါ။
– CSC ကိုနှိပ်ပြီး ဒေါင်းလုပ်ဆွဲထားသောဖိုင်မှာ
GT-I9100-MULTI-CSC-OXALPH.tar file ကိုရွေးပြီး နှိပ်ပေးပါ။
( ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း သက်ဆိုင်တဲ့ files တွေကို သေချာရွေးပေးဖို့လိုပါတယ် )
သက်ဆိုင်တဲ့ files တွေကို သေချာရွေးပေးပြီးပြီ ဆိုလျှင်
အရေးကြီးတဲ့ dwonload Mode အဆင့်ကိုသွားပမယ်။
download mode သွားဖို့အတွက် volume down နှင့် middle Key ကိုတွဲ
ဖိနှိပ်ထားပြီး Power button ကိုတခါထဲနှိပ်ပေးပါ။
ဖုန်းက ပုံမှန်အတိုင်း တက်လာပါမယ်
( volume download နှင့် middle key ကိုမလွှတ်ပါနဲ့ )
Samsung logo အပြီး ၂ကြိမ်မြှောက်မှာ
အောက်ပါစာတန်း ၂ ကြောင်းကိုတွေ့မြင်ရမယ်
Volume up ကိုရွေးပြီး download mode ကိုသွားပါမယ်။
Android logo ပုံစံ နဲ့ downlaod mode ကိုရောက်ပြီဆိုလျှင်
ဖုန်း နှင့် ကွန်ပြူတာကို USB Cable နဲ့အသုံးပြုပြီးချိတ်ဆက်ပါမယ်။
ID:COM မှာ အ၀ါရောင်ကာလာနဲ့ “ADDED” message boxes ကို
( အခု message က သင့်ဖုန်းနဲ့ Flashing process ပြုလုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းပြတာပါ )
အခု ” START ” Button ကိုနှိပ်ပါ။
Firmware update လုပ်နေစဉ်မှ သင့်ဖုန်းကို ( မပိတ်ပါနဲ့ / Cable ကို မဖြုတ်ပါနဲ့ )
ဖုန်းက reboot ဖြစ်သွားခါကြမှာ မိမိ ဖုန်း Firmware update တဲ့အဆင့် ပြီးဆုံးမှာပါ။
Congratulation !!!!!!!!!! ပါ အခုလို သင့် ရဲ့ Samsung Galaxy S2ကို
Firmware install အောင်မြင်အောင် ပြုလုပ်နိူင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။
သင့် ရဲ့ Samsung Galaxy S2ကို
Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich XXLPH Firmwar နဲ့အသုံးပြုလို့ရပါပြီ။
သင့်ဖုန်းထဲက Cache data ကို Cleaning ပြုလုပ်ရအောင်..
သင့်ရဲ့ဖုန်းကို recovery mode သို့သွားပါမယ်။
အဲအတွက် Volume up and Middle Key ကို
တွဲ ဖိနှိပ်ထားပြီး Power button ကိုတခါထဲနှိပ်ပေးပါ။
( volume up နှင့် middle key ကိုမလွှတ်ပါနဲ့ )
ပုံစံ တမျိုးနဲ့ recovery mode ကိုရောက်ပြီဆိုလျှင်
volume up နှင့် volume down အသုံးပြုပါမယ် ပြီးတော့
options confim အသုံးပြုဖို့အတွက် Middle Key ကိုသုံးပါမယ်။
volume up နှင့် volume down အသုံးပြုပြီး menu ထဲမှ
” wipe cache partition ” ကိုရွေးပြီး meddile key ကိုနှိပ်ပေးပါ။
cache data တွေကို clear ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
menu ထဲမှ ” reboot system now ” ကိုရွေးပြီး
meddile key ကိုနှိပ်ပြီး reboot လုပ်ပေးပါ။
Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich XXLPH Firmwar ကို
အဆင်မပြေတဲ့အဆင့်မျိုးရှိခဲ့ရင်လဲ အောက်မှာ Command ပေးပြီးထားခဲ့နိူင်ပါတယ်။
အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် …